Public Health in Myanmar: တင်ပါးဆုံရိုး ကျိုးခြင်း ၏ ဂယက်များ
I absolutely agree with your opinion on the article in Irrawaddy. I am not in the field of medical profession. I think that we need one like you. Great!
ဆရာဇီဝကရေ ကျွန်မလည်း မနေ့က ကျွန်မပို့စ်တခု အောက်မှာ စာဖတ်သူ ဒေါက်တာကျော်ဇင် လာရေးထားတဲ့ မှတ်ချက်မှာ ဒီသတင်းအကြောင်း ပြောထားတာ တွေ့လို့ သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းက သိသိသာသာကြီး လွဲမှားမှုကြောင့် ဆိုတဲ့ judgment လုပ်ထားတဲ့ ၀ါကျနဲ့ စထားပြီး ဘယ်လို၊ ဘာကြောင့်၊ ဘယ်နေရာမှာ လွဲမှားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက် ထပ်မလာတော့ ဒေါက်တာကျော်ဇင်လည်း ဆရာဇိဝကလို ထောက်ပြထားတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဧရာဝတီမှာတော့ အချိန်မရလို့ ပြီးတော့ ကျွန်မ မှတ်ချက်ကို ဖေါ်ပြပေးဖို့ မသေချာလို့ မှတ်ချက်တော့ ဘာမှ ပြန်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အခြအနေတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နားမလည်ပဲ ရေးလိုက်လို့ သတင်းက သတင်းပုံစံ မဟုတ်ပဲ မိမိထင်တာကို လူတယောက်က ပြောထားသလို ဖြစ်နေတာ ကျွန်မလက်ခံတယ်။ ဒါကို ဆရာဇိဝက အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ တင်ပြ ထောက်ပြထားတာလေး သိပ်ကောင်းပါတယ်။ စာဖတ်သူ အများအတွက်လည်း အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒီပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိုင်ဆေး … ဧရာဝတီမှာတော့ ဒေါက်ဒေါက် တွေကို ဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ချေမှုန်းနေကြ ပြီ။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုကို (ကိုယ့်အတွက်) အဆင်ပြေသလို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ကျင့်သုံးနေကျ ဆရာသမားတွေ ကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီး ကို သင်းတို့ ရဲ့အရည်အချင်း၊ အဆင့်အတန်း နဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ဖွင့်ပြနေကြပြီ။ ကွန်မင့် တွေကို ဝမ်းဝေးဘဲ တင်ပေးတယ် ကျုပ်ရေးတာ ကို လည်း ဧရာဝတီက အယ်ဒီတာမင်းတွေက တင်ပေးဖို့ ငြင်းပယ်ကြတယ်။
ဆရာဇီ ခင်ဗျား … ဧရာဝတီအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဆောင်းပါးက တတ်သိတဲ့သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဟားစရာကြီး ဖြစ်နေ တာကို ရိပ်မိကောင်း ရိပ်မိ နိုင်ပါတယ် သို့ပေမယ်လို့ တတ်သိတဲ့ သူထက် မတတ်သိတဲ့ သူကအဆပေါင်းများစွာပိုတာ၊ မြန်မာ အများစုဟာ ကျိုးကြောင်းထက် အီမိုရှင်နယ် တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားတတ်တာ၊ ကောက်ရိုးမီး သွေးဆူ တတ်တာ တွေကို ပိုပြီး အဓိကထား သုံးသပ်ထားပုံရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်း(မန္တလေး) ဒု ဥက္ကဌ (၂) ဒေါက်တာဝင်းရှိန် အနေနဲ့လည်း
“နည်းပညာရော ကျင့်ဝတ်တွေကင်းမဲ့နေတာကိုလည်း ထည့်တွက်ရမယ်” လို့ ထော့နင်း ထော့နင်း ဆို နေမယ့် အစား၊ ထည့်တွက်ရုံတွက် နေမယ့်အစား ဆရာဝန်များ အသင်း (မန္တလေး) ဒု ဥက္ကဌ (၂) တစ်ယောက် အနေနဲ့ တစုံတရာ အပြု သ ဘော ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရင် နတ်လူ သာဓု ခေါ်စရာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အဓိက အနေနဲ့ တော့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အနေနဲ့ ဘဘ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် ရဲ့ ဖိနပ်ကို ပြေးပြေး ချွတ်ပေးဖို့ ထက် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကျိုးစားရင်၊ ဆရာဝန်တွေကို ရှာကြံပြီး ဒုက္ခပေးဖို့ထက် ဆရာဝန် တွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ် ဆိုရင် ဖီဇီရှင်ကြီး ရဲ့ “မယ်တော်” ကလေးကလည်း သိပ်စိတ်ကွက်မယ် မထင်ပါဘူး။
အိုင်ဆေး … အခါအခွင့် ကားသင့် ချေပြီ ဆရာဝန်တွေကို သရော်စော်ကားဖို့ စိတ်အားထက် သန်ကြသူများ အမနာပရေးနိုင် ပြောနိုင်ရန် ဧရာဝတီ သို့ကြွကြကုန်။
Liu Kailai said...
This blog showed the real reason why we are ruled by military since we got independence from English. We all are not trained to know the meaning of FREEDOM.
This blog (AYEYARWADDY) showed the real reason why we are ruled by military since we got independence from English. We all are not trained to know the meaning of FREEDOM. I think this blog represent the people fighting for DEMOCRACY.
မြန်မာနိုင်က မီဒီယာတွေက ဘယ်အရာက မှန်တယ်၊မှားတယ်ဆိုတာ သေချာမသိဘဲ၊ လူနာရှင်ပြောသမျှကို အမှန်လုပ်ပြီးဆရာဝန်တွေကို အပုပ်ချနေတော့မှာလား။ မီဒီယာ ဥပဒေတွေနဲ့ တားဆီးလို့မရဘူးလား။ မဟုတ်ရင် ရိုးသား ယုံလွယ်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဆရာဝန်တွေကို လူသတ်ကောင်တွေ၊ မတတ်ဘဲနဲ့ လူ့အသက်ကို မညှာမတာလုပ်တဲ့သူတွေလို့ထင်သွားနိုင်လို့ပါ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ သိပ်ကိုမွန်မြတ်ပြီးကိုယ်ကျိုးစွန့်ရတဲ့ အလုပ်လို့ ကျွန်မတို့သိထားပါတယ်။ ကျွန်မတော့ ဒီသတင်းနဲ့ အောက်မှာရေးထားတဲ့ comment တွေကို ကြည့်ပြီးစိတ်တောင် မကောင်းဘူး။
Thanks to all of u. Whatever the reason of attacking us, we have to maintain our quality of care. Don't see that kind of media with no responsibility as enemies but rather as feedbacks. Blame is easy, change is not.
ဧရာဝတီ Blog က ဒေါက်ဒေါက်တွေ ကိုမှမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင် လုပ်ကိုင် စားသောက် နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် တွေအားလုံးကို ဘုံရန်သူလို သတ်မှတ်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဆိုတာ လူကြားကောင်းအောင်နဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး များများ ရရှိအောင်လို့ပါ။ မူရင်းရည်မှန်းချက်က မြန်မာပြည်ပျက်သုန်းရေး နဲ့ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိရေးပါ။